कलर्सका तीनवटा स्मार्टफोनको मूल्य घट्यो  OnlineKhabar
कलर्सका तीनवटा स्मार्टफोनको मूल्य घट्यो
६ चैत, काठमाडौं । बारफोन प्रयोगकर्तालाई स्मार्ट फोनमा परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ कलर्स मोबाइलले आफ्ना तीनवटा मोडलका स्मार्टफोनको मूल्य घटाएको छ ।
जसअनुसार यसअघि ११ हजार ४ सय ९५ रुपैयाँ पर्ने पी८५ अब ९ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँमै पाइने छ । यस्तै ७ हजार ४ सय ९५ पर्ने पी५० अब ६ हजार ६ सय ९५ मा उपलब्ध हुने छ । पहिले ६ हजार ४ सय १० मूल्य रहेको पी३२ अब केवल ५ हजार ४ सय ९५ मा पाइने छ ।
पी ८५ का विशेषताहरुमा औंला छापको सेन्सर प्रमुख हो जसले तत्काल बन्द गर्न, खोल्न, तत्काल डायल गर्न, एप र म्यासेज बन्द गर्न, खोल्न मद्दत पुग्दछ । यसमा १६ जिबी रोम र १ जिबी र्‍याम, पछाडी ८ मेगापिक्सल र अगाडी ५ मेगापिक्सल क्यामरा रहेका छन् ।
यस्तै पी५०को विशेषतामा ५ इन्चको स्त्रिmन, १.३ गेगाहर्ज क्वाड कोर प्रोसेसर, २२०० एमएएच ली-आयोन ब्याट्री रहेको छ भनें पि३२ मा एण्ड्रोइड ६.०, १.३ गेगाहर्ज क्वाड कोर प्रोसेसर र ८ जिबी रोम र १ जिबी र्‍याम रहेको छ ।
नेपालमा कलर्स मोबाइलको बजारीकरण सन् २००९ देखि बिक्रि सुरु भएको कलर्स मोबाइल हाल झण्डै २७ लाख ग्राहकले चलाउने गरेको बिक्रेता टेलिटक नेपाल प्रा.लिले जनाएको छ ।
२०७३ चैत ६ गते १८:१६ मा प्रकाशित
tekendra charmakar लेख्नुहुन्छ | २०७३ चैत ७ गते १२:४४
घटेको मुल्य कहिलेदेखि लागु हुन्छ ।
DRP लेख्नुहुन्छ | २०७३ चैत ७ गते २२:०१
यो कम्पनिको फोन सित्तैमा पाए पनि नलिनुहोला. यो भन्दा थर्ड क्लास फोन अरु देखेकै छैन. फोनको क्वालिटी र सर्भिस सेन्टरले दिने सेवा खत्तम छ. एसको स्पेयर पार्ट्स जस्तै चार्जर र ब्याट्री समेत पाइदैन.